Rehefa bevohoka ianao aorian'ny bevohoka mafy?
Indrisy anefa, na dia eo aza ny haavon'ny fivoaran'ny fitsaboana, ny toekarena amin'ny ankapobeny, indrindra fa ny fanitsakitsahana ny maha-bevohoka azy - ankehitriny dia tsy mahazatra. Maro ny antony mahatonga ny fivoarany. Ary indraindray, indraindray dia tsy azo atao ny mametraka ilay iray izay nitarika ny fanitsakitsahana ny fitondrana vohoka, ny dokotera tsy afaka.
Na dia eo aza ny fahasarotana ara-psikolojika mahatsiravina izay iharan'ny vehivavy bevohoka rehetra, amin'ny toe-javatra toy izany, ny ankamaroan'izy ireo dia tsy mamoy fo, ary ny rehetra dia tsy hiandry ny fotoana hanombohan'ny vanim-potoana fanarenana ary hamela ny dokotera hanomana ny fitondrana vohoka manaraka. Izany no mahatonga ny fanontaniana hoe amin'ny fotoana ahafahanao miezaka ny bevohoka rehefa bevohoka mafy dia mafy ny vehivavy. Andao hiezaka hamaly izany.
Rahoviana aho no afaka mikasa ny bevohoka taorian'ny fetal?
Matetika ny dokotera rehetra rehefa mamaly io fanontaniana io dia mandany fotoana iray isaky ny 6 volana. Ny zavatra dia ny fotoana tokony hikarakarana vatana vehivavy ny taovam-pananahany mba hiverina any amin'ny fanjakana taloha. Raha ny marina dia tapitra amin'ny fanadiovana ny taovam-pangatsiahana rehetra, - ny fanesorana ilay embryon-nodimandry avy ao amin'ny lava-tranon'ny tranon-jaza, izay tapaka ny tara ambony amin'ny endometrium uterine. Rehefa avy navaozina tanteraka izy dia azo atao ny manandrana miteraka indray ny zaza.
Inona no tokony hodinihina rehefa manomana vohoka rehefa maty?
Rehefa niresaka momba ny hoe tsara kokoa ny bevohoka rehefa bevohoka be, dia andeha horesentsika hoe inona no tokony hoeritreretinao rehefa mikasa.
Voalohany aloha, ny dokotera dia manandrana mametraka ny antony mahatonga ny zaza ho faty. Mba hanaovana izany, ny foetus voatokana dia nesorina tapa-tavy ho an'ny fianarana, izay hanampy amin'ny fanazavana ny toe-javatra. Ambonin'izany fotoana izany, ny mpivady dia asaina misahana ny fanadihadiana ara-pananahana, izay ahafahana manilika ny fisian'ny fandikana ny fitaovana ara-pahasalamana. Ary koa, rehefa mametraka ny antony, dia tsy mahazatra ny mpivady ny manana fitsapana ra ho an'ny hormones, ary mitarika fandinihana tanteraka ny aretina mikraoba sy ny aretina mahazo ny rafi-pitaterana.
Aorian'ny fiorenana ny antony, ny fitsaboana sahaza dia atolotra, mandritra ny fotoana tokony hiarovana ny mpiara-miasa. Amin'ny fiafaran'ny fitsaboana sy fitsapana miverimberina, izay manamarina fa samy manana ny maha izy azy ireo, dia afaka manomboka manomana vohoka vaovao ianao.
Araka izany, azo lazaina fa ny valin'ny fanontaniana mikasika ny fotoana ahafahan'ny olona iray bevohoka aorian'ny fanadiovana ny vohoka mangatsiaka dia miankina tanteraka amin'ny toetry ny rafitra fananahana ny vehivavy sy ny tsy fisian'ny korontana.
Inona no fiantraikan'ny fikarakarana fifohazana any am-piandohana?
Tsiravina kely ao amin'ny fitondrana vohoka
Ny fitondrana vohoka nohavaozina - famantarana
Fanosehana avy amin'ny tratra nandritra ny fitondrana vohoka
Zalain ao amin'ny fitomboan'ny zaza
Ny aretim-pivalanana amin'ny fitondrana vohoka dia efa ela niainana - antony
Famaranana andro ho an'ny vehivavy bevohoka
Dr. Mama amin'ny fahantrana
Ny dokam-barotra, ho toy ny iray amin'ireo antony mahatsiravina
Lantihy mody - ny fironana tsara indrindra amin'ny lohataona, lohataona, lohataona sy ririnina
ATSTS amin'ny kohaka maina
St. Patrick ao amin'ny Eglizy Ortodoksa - iza io ary ahoana no tokony hivavaka?
Ny fo mivavaka
Miasa ho an'ny tanora 13 taona
Akne eo amin'ny vatana
Ahoana no ahafahana manala voalavo amin'ny trano manokana?
Ny rhinitis mahazatra - ny fomba tsara indrindra hanesorana ny hatsiaka mandrakizay
Ny rakikira vaovao amin'ny taom-baovao dia - sary tsara tarehy amin'ny sary amin'ny ririnina
Kitroka ao amin'ny zaza - soritr'aretina sy fitsipika fototra amin'ny fanampiana voalohany
Ahoana ny fampiasana Smart TV?